Cygnus-X1, oo ah loox il furan oo loogu talagalay xakamaynta gantaallada guriga | Laga soo bilaabo Linux
Waxaan qabaae inbadan oo naga mid ah ayaa ku riyooda sidii caruur wax haysata maalin maalmaha ka mid ah mudnaanta aan yeelan karo ama duuli gantaal guryaha lagu sameeyo ama markab yar oo loogu talagalay inuu duulo oo wixii ka sarreeya oo dhan inuu yeesho amar kaas oo na siin kara xorriyadda aan ku toosin karno markay doonto.
Maanta, sida oo kale, riyadaas mar hore ayay dad badani rumoobeen Hagaag, waxaa jira moodello ganacsi oo aad iibsan karto ama sidoo kale marka laga hadlayo drones, sidoo kale wax la mid ah wixii aan carruur ahaan doonayn lahayn.
Laakiin aan runta kahadalno, inbadan oo naga mid ah ayaa jeclaan lahaa qaabeynta aaladda gacmaheena iyo wixii ka sareeya awooda oo dhan si aan u barano sida loo soo ururiyo iyo sida qayb waliba u shaqeyso.
Oo wanaagsan maanta waxaan u imid inaan la wadaago macluumaadka Waxaan ka helay shabaqa wax la mid ah waxaan ku sifeeyo oo ah Mashruuca Cygnus-X1 wuxuu kobciyaa loox furan ee mashiinka jet riixida xakamaynta dulinka iyo nidaamyada laxiriira.
Xamaasad Waxay u isticmaali karaan saxanka inay xasiliyaan duulimaadka gantaallada guryaha lagu sameeyo iyo wixii ka sarreeya iyo waxa ugu muhiimsan ee ku saabsan mashruucan ayaa ah in horumarka mashruuca lagu qaybiyo liisanka GPLv3.
Taas oo aan ku heli karno tiro badan oo jaantusyo la heli karo, naqshadeynta PCB iyo qeexitaan ah jilitaanka EasyEDA (Electronic Design Automation).
Muuqaal kale oo ka dhex muuqda mashruuca ayaa ah guddiga ayaa si buuxda ula jaan qaadaya Arduino IDE iyo jawiga horumarinta Platformio.
Marka lagu daro xaqiiqda ah in qaybaha softiweerku ku qoran yihiin C ++ iyo aasaas ahaan, SAMD51 microcontroller ayaa la adeegsadaa, taas oo wuxuu ku shaqeeyaa inta jeer ee ah 120 MHz wuxuuna leeyahay 1 MB oo lagu dhisay Flash Memory-da.
Flash-ka banaanka ah ama kaarka SD-ka ayaa loo isticmaali karaa in lagu duubo telemetry-ga inta duulimaadku socdo. Xogta iyo amarrada waxaa lagu kala qaadaa iyada oo loo marayo Bluetooth Low Energy (BLE), oo kuu oggolaanaya inaad isticmaasho taleefannada casriga ah ee caadiga ah si aad u maamusho.
Saddex wadiiqadood oo koontarool hawleedka ah ayaa la bixiyaa: laba dhaqdhaqaaqa mashiinka mashiinka marka dulinka riixitaanka uu isbeddelo iyo mid nidaamyada kale ah, tusaale ahaan, si loo kiciyo geynta parachute. Waxa kale oo jira laba pyrochannels loogu talagalay shidida iyo fiilooyin dhalaalaya iyo kanaal koronto lagu kantaroolo si loogu beddelo gariiradda iyadoo loo marayo gyro.
Batariyada 2S ama 3S LiPo waxaa loo isticmaali karaa ilaha korantada. Ka mid ah dareemayaasha la isticmaalay waxaa ka mid ah isku-darka xawaaraha-gyro (IMU BOSCH BMI088) iyo altimeter (MS560702). Isku xirayaasha UART iyo I2C ayaa loo heli karaa inay ku xirmaan dareemayaal dheeri ah sida moduleka GPS.
Astaamaha ka muuqda mashruuca, waxyaabaha soo socda ayaa lagu sheegay:
Iyada oo ku saleysan SAMD51 microcontroller ee ka shaqeeya 120 MHz oo leh 1 MB oo flash ah. (ATSAMD51J20A-MUT).
Lagu xakameyn karo Bluetooth Low Energy (BLE), tani waxay u oggolaaneysaa xogta in la diro lana helo inta u dhexeysa gantaalka iyo casriga.
3 Wareegyada 'Servo Channels' (Laba ka mid ah kanaallada ayaa loo isticmaalaa in lagu riixo riixitaanka midna waxyaabaha kale sida habka ka bixitaanka baarashuudka farsamada).
2 idaacadaha Pyro ee awooda ineey shido mootooyinka iyo silig nichrome ah. Si buuxda PWM loo maamuli karo xakamaynta isbeddelka hadda jira.
1 x DC xakamaynta mootooyinka waqtiyadaas markaad u baahan tahay xakamaynta wareejinta shaashadda falcelinta.
Waxay la shaqaysaa baytariyada LIPO 2S iyo 3S. 3S la doorbido (11,1V)
Waxaa ka mid ah terminaal hub ka dhigis ah si looga fogaado in lagu guuldareysto kanaallada loo yaqaan 'pyrotechnic channels'.
Lixda dhidibka IMU (BOSCH BMI088) iyo altimitir (MS560702)
Dekedda kaarka SD si aad u badbaadin karto xogtaada.
16MB ee keydinta bannaanka dibadda. Keydso xogta inta lagu jiro duulimaadka (iskuxirka kaararka SD wuxuu noqon karaa mid goosgoos ah inta lagu jiro duulista gariir dartiis)
Buzzer iyo RGB Neopixel LEDs
Dheeraad ah UART iyo xidhiidhada I2C haddii aad rabto inaad ku xidho dareemayaal dibedda ah sida moduleka GPS ah.
Ugu dambeyntii, hadaad xiisaynayso inaad waxbadan ka ogaato ee mashruuca waxaad kala tashan kartaa faahfaahinta, buugaagta iyo jaantusyada Xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Cygnus-X1, oo ah loox il furan oo loogu talagalay xakamaynta gantaallada guriga
Aynu Encrypt ku xallino arrinta shahaadada aaladihii hore ee Android